Inona ny Mety Lazain’ny #SaudiCables Amintsika Momba ny Politika Ivelan’ny Fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Inona ny Mety Lazain'ny #SaudiCables Amintsika Momba ny Politika Ivelan'ny Fanjakana
Voadika ny 24 Jona 2015 12:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, عربي, Română , Español, Italiano, Magyar, English
Mpikatroka mitana sora-baventy sy afisy mitaky ny famotsorana ny blaogera Saodiana Raif Badawi ao Berlin, Alemaina, tamin'ny 22 Mey 2015 — Nanohana ny mpikatroka hanatontosa ny fihetsiketseha-panoherana eo anoloan'ny Masoivoho Saodiana ao Berlin ny Amnesty International, hofitakiana ny famotsorana ilay Saodiana blaogera sady mpikatroka Raif Badawi, izay nampidirina am-ponja tamin'ny 2012 ary voasazy hokapohina in-1000 noho ny fanopana ny Islam. Ny #SaudiCables izay mampiseho fa manaramaso hatramin'ny antsipirihany ny fiainana andavanandron'ny olompireneny ny fanjakan'olo-tokana tsy refesi-mandidy, ary manalava ny tanany hatrany ivelan'ny sisintaniny. Saripikan'i Jakob Ratz. Copyright: Demotix
Manome torohay tsy hay sandaina amin'ny politika ivelan'ny fitondram-panjaka ny telegrama atsasa-tapitrisa naporitsaka momba ny politika ivelan'i Arabia Saodita, izay niteraka adihevitra manerana ny media sosialin'ny Oala.
Hita ao amin'ny telegrama naporitsaka avokoa ny lohahevitra isan-karazany hatramin'ny fanomezan'ny fanjakan'olo-tokana tsy refesi-mandidy “visa” amin'ny vehivavy mpihira ka hatramin'ny politikam-paritra sy iraisampirenena. Rehefa mamaky ireo taratasy naporitsaka ianao dia mety hanana tsoakevitra maro.
A. Mety hoe pratika ny ataon-dry zareo:
Iray amin'ny telegrama no ahitana ny anabavin'ny mpitondra fivavahana shiita iray malaza nanatona an'i Arabia Saodita hangataka fanomezana. Ny fikambanana mpanao asasoa Al-Sadr dia nahazo anarana avy amin'i Mosa Al-Sadr, izay mpanorina ny antoko Libaney shiita AMAL, vondrona mikambana amin'i Hizbullah.
Na dia eo aza ny resabe ifandiran'ny Sonita sy Shiita ao Afovoany Atsinanana, ny fanapahan-kevitry ny Fanjakana dia ny hanolotra fanohanana ara-bola ilay fikambanana tsy ankilteniteny. Manondro izany fa miezaka ry zareo ny hanangana finamanana eo amin'ny mpifanandrina ara-potokevitra. Ny fisarahana ara-pivavahana dia miteraka ady tombontsoa mivandravandra fa tsy tahaka izay anoritsoritan'ny fampitam-baovao azy akory.
B. Mivangongo amin'ny toerana iray ny politikan-draharaham-pirenena:
Goavana ny habetsaky ny telegrama mivantana any amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny Saodiana Al-Faisal. Ny fahitana fa lazaina aminy avokoa ny zavatra rehetra hatramin'ny madinika indrindra no mampiseho fa mitantana hatramin'ny bitika ny departemantan'ny raharaham-bahiny izy.
Hita amin'ity telegrama ity ny fangatahan'i Al-Faisal ny Minisiteran'ny Filazam-Baovao hanome azy ny anaran'ny skoto zazalahy voafantina amin'ny fifanakalozam-programa amin'i Etazonia, asa tokony ataon'ny mpiasam-panjakana tsotra any amin'ny toeran-kafa.
C. Misozy izany manjakazaka tanteraka izany:
Hatraiza no mijanona ny fanarahamason'ny fanjakana? Raha ny momba ireo fitondram-panjaka ao amin'ny Oala dia mety mila fotoana kely isika hamaliana izany fanontaniana izany. Mampiseho ny telegrama fa lava tanana mety hahatratra ny ainao sy ny fianakavianao ny fanjakana. Ity telegrama ity mampiseho olom-pirenena Syriana iray izay manana anabavy manambady mpitsara Bahrainitaka nifamaly an-telefonina tamin'ny anabaviny, izay nahatonga azy nofotopotorin'ny sampam-pitsikilovana Saodiana mandrapanasoniaviny taratasy milaza fa efa nivaha ny antom-pifamaliana nisy.
D. Vola no lakile hahazoana fahefana:
Azo jerena amin'ny habetsaky ny vola ampiasain-dry zareo ny lanjan'ny tara-kevitr'i Arabia Saodita. Azo ampiasaina hanohanana ara-bola ireo mpanohana tahaka ilay mpitarika politika Libaney, Samir Geagea, mpitarika ny Hery Libaney (LF), antoko politika kristianina mpikambana amin'ny Firaisankinan'ny 14 marsa. Amin'ny telegrama etsy ambany izy no miantso fanampiana ara-bola avy amin'i Arabia Saodita handoavana ny fiarovan-tenany manokana.
Ireo telegrama ihany koa dia mampiseho ny vola saodiana nampiasaina hanohanana ara-bola ireo fantsona fahitalavitra izay mizara ny fomba fijeriny sy miasa ho amin'ny tombontsoan-dry zareo, tahaka ny fantsona fahitalavitra Libaney MTV. Telegrama diplomatika iray nilaza fa nangataka 20 tapitrisa dolara US ry zareo fa 5 tapitrisa dolara US ihany no azony miaraka amin'ny fepetra hanomezan-dry zareo drafitra amin'ny fiantohan-dry zareo ny tombontsoan'ny fitondram-panjaka amin'ny tati-baovao ataony.
Ny vola saodiana, araka ny telegrama diplomatika, dia nampiasaina ihany koa handrahonan'ny governemanta saodiana ireo fantsona mandefa akora tsy mirona mankany aminy. Ohatra amin'izany ity telegrama mampiseho ny nitreronan'ny ambasadaoro saodiana ao Kairo an'i Naguib Sawiris miliaridera tompon'ny ONTV noho ny nampiatranoany ilay Saodiana mpanohitra Saad Alfaqih. Nilaza ny telegrama fa nampanantena ny tsy hanao izany intsony i Sawairis amin'ny manaraka ary nanolotra ny hampiatrano ny ambasadaoro saodiana hitsipaka izany nolazain'i Alfaqih.
Ny tena mahaliana aza dia ny fihetsiky ny fitondram-panjaka manoloana ireo taratasy niporitsaka ireo, tsy nitsipaka ny fahamarinan'ireo antonta-taratasy ireo ry zareo, fa nisy manampahefana iray avy amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-Bahiny naneho hevitra fa: “Tsy mifanohi-kevitra amin'izay politikan-draharahambahiny noraisin'ny fitondram-panjaka ireo antonta-kevitra niporitsaka ireo.
Aza miala fa mbola mangady ireo tahirinkevitra hafa amin'ireo niporitsaka ny Global Voices.
Vakio ny tatitra manokana: WikiLeaks mamoaka ny #SaudiCables [en]